यी हुन् इन्जिनीयरिङ पढेर बलिउडमा चम्किएका कलाकार
भदौ २४, २०७६
एजेन्सी- यदि तपाईंलाई कलाकार बन्ने सपना 'एक्टिङ स्कूल'बाट मात्रै पूरा हुन्छ भन्ने लागेको छ भने तपाईं गलत हुनुहुनेछ । बलिउडमा केही यसत्ा सेलेब्रेटी छन् जो भिन्नभिन्न विषय अध्ययन गरेर रंग संसारमा आएका छन् । त्यस्तै आज हामी इन्जिनीयरिङको पढाइ सकेर कलाकारिता क्षेत्रमा जमेका केही सेलेब्रेटीबारे जानकारी दिनेछौं ।
सुशान्तले दिल्ली सुशांत ने दिल्ली टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनीयरिङको अध्ययन गरेका छन् । यद्यपि उनले अभिनेता बन्नका लागि अन्तिम वर्षको पढाइ सकेनन् । उनले बीचमै कलेज छोडिदिए । उनले अल इन्डिया इन्जिनीयरिङ एक्जाममा ७ औं स्थानमा नाम निकालेका थिए ।
बलिउडका नयाँ अभिनेता कार्तिक आर्यनले मुम्बईमा बायोटेक्नोलोजीमा इन्जिनीयरिङ गरेका छन् ।
कृति सेननले दिल्लीको जेपी इन्स्टिच्यूट अफ इनफर्मेशन टेक्नोलोजी, नोएडादेखि इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युनिकेशनमा बी टेक गरेकी छन् ।
आर माधवन फिल्म 'थ्री 'इडियट्स'मा इन्जिनीयरिङको भूमिकामा छन् । तर उनी वास्तविक जीवनमै इन्जिनीयर हुन् । उनले कोल्हापुरको राजाराम कलेजबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयरिङ गरेका छन् ।
सोनू सूदले नागपुरको यशवंतराव चवन कलेजबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरिङको अध्ययन गरेका छन् ।
तापसी पन्नूले कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनीयरिङ गरेकी छन् ।
रितेश देशमुख, विक्की कौशलले पनि इन्जिनीयरिङको अध्ययन गरेका छन् ।
भाइरल भयो प्रियंका र आयुष्मानको तस्वीर, प्रियंका भन्...
चीनकी यी बाहुबली महिला टिकटकमा छिन् भाइरल (भिडियो)
तत्कालै आउँदैन द कपिल शर्मा शो, अभिनेताहरू उपलब्ध ...
रश्मि देसाईको बेडरूम फोटोशूट भयो भाइरल
आफूखुशी संसदीय दलको नेता दाबी गर्ने महतोलाई कारवाही हुन सक्छ– उपेन्द्र यादव [अन्तर्वार्ता]
जेठ २, २०७८
सत्ता सहकार्यबारे उपेन्द्रजीको आग्रह व्यक्तिगत हो, पार्टीले निर्णय लिन्छ– शरतसिंह भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सशर्त विश्वासको मत दिन्छौं : जसपा नेता केशव झा [अन्तर्वार्ता]
अरब भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरूलाई अक्सिजन उपहार !
निराशाको बादलबीच युग निर्माणको सम्भावना : यस्ता छन् युगद्रष्टाका संकल्प
जेठ १, २०७८
स्वास्थ्यकर्मीलाई विराट माया र असिम आभार !
आफ्नो र अरूको जीवन जोगाउन फेरि एकपटक नागरिक सचेत बन्नुपर्ने समय
बैशाख १४, २०७८
धन्यवाद पुनर्निर्माणका सारथिहरू
बैशाख १२, २०७८
निषेधाज्ञामा मदिरा बेच्ने ६ पसले पक्राउ
महोत्तरीमा सैनिक आवासीय महाविद्यालयको उद्घाटन, फिल्ड अस्पताल पनि सञ्चालनमा
सरकार पुनर्गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक शुरू
कोभिडको उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक : सर्वाेच्च अदालत
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसमा आयोजित कार्यक्रम सम्पन्न, विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रुपान्तरणमा जोड
जसपाका पदमुक्त सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वाेच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
रौतहट कारागारमा कैदीबन्दीसँगको भेटघाट बन्द
विदेशबाट धमाधम अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदै निगम
एमालेले भोट मागेपछि बादललाई जिताउन सूर्यमा मतदान गर्ने राप्रपाको निर्णय